Ganna 31'f kan ture ADWUI'n eenyu? - BBC News Afaan Oromoo
Addi Dimokiraatawaa Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa (ADWUI) akka walta'insa Addaatti kan hundeeffame waggoota 31 dura A L I'tti Caamsaa 1981 naannoo Tigiraay, bakka Tembeen Haddii Gezaahitii jedhamutti ture.
Paartiin biyya bulchu miseensota miiliyoona ja'a ta'an akka qabu himamuuf kun ilaalcha siyaasaa harkifata gara bitaa qaban keessaa bahuun Warraaqsa Dimokiraasiin gaggeeffamaa tureera.
Adda durummaan kan ADWUI hundeesse Addi Bilisa Baasaa Tigiraay (TPLF) sirna Dargii mormuun mormuudhaan A L I Gurandhala bara 1967 gara qabsoo hidhannootti erga seenaa waggaa 44ffaa keessa jira.
Kan dura dhaabbileen siyaasaa biyyaalessaa Sochii Dimokiraatawaa Saba Amaaraa (Bihaden) kan yeroo ammaa Paartii Dimokiraatawaa Amaaraa (ADP); kan duraan Dhaabbta Dimokiraatawaa Ummata Oromoo (DhDUO) yeroo ammaa ammoo Paartii Dimokiraatawaa Oromoo (ODP)fi Sochii Dimokiraatawaa Ummata Kibbaa (Dehiden) walitti dhufanii Adda kanatti makaman.
'Falmiin ABUT fi paartiilee sadan gidduutti cimuu mala'
Yeroo Dargiin aangoorraa maqfameerraa kaasee dura ta'aa paartichaa yeroo dheeraa kan turan Obbo Mallas Zeenaawwii waggaa torbaan dura hanga lubbuun isaanii darbeetti biyyattiis ministira muummee ta'uudhaan gaggeessaniiru. Waggoota torba dura Obbo Mallas yero, itti-aanaa isaanii kan ture Obbo Hayilemaariyam Dassaaleny turan kan aangoo fudhatan.
Adda durummaan Oromiyaa keessatti jalqabee guutummaa biyyattiitti mormiin finiiinuu isaattii aansuudhaan ministirri muummee duraanii Obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny fedhii isaaniitiin aangoo isaanii gadi dhiisan. Aangoo isaanii gadi dhiisuu Obbo Hayilemaariyaam kanaa booda ammoo Abiy Ahimad (PhD) gaggeessaa ADWUI ta'an.
Aangoon waggoota dheeraaf paartii ol-aanaa Addichaa kan ture TPLF irraa gara ODP'tti ce'uun isaa ibsamee akka ture ni yaadatama.
Adda paartilee afranii kan ture ADWUIn, koree giddugaleessaa wagga lama lamaan tokkoo tokkoo paartilee miseensa Addichaa ta'an keessaa filaman miseensota hoji-raawwachiiftuu 36 ta'aniin gaggeeffama.
ADWUI kan itti darban Liigiin Biyyaalessaa Hararii (Habilii), Paartiin Dimokiraatawaa Biyyaalessaa Affaar (Abippaa), Sachii Dimokiraatawaa Ummata Gaambeellaa (Gahaadeen), kan duraan Paartii Dimokiraatawaa Ummata Somaalee Itoophiyaa (Isodeeppaa) kan yeroo ammaa ammo Paartii Dimokiraatawaa Somaalii (Sodeeppaa), akkasumas Paartii Dimokiraatawaa Ummata Beneshaangul Gumuz (Beguhideeppaa) shanaan paartilee deggertoota ADWUI turan.
ADWUI biyyattii erga to'ateen booda Caamsaa 24-28 ALI bara 1983tti ya'iwwan dhaabbilee siyaasaa adda addaa taasifamuun, motummaan ce'umsaa hundeeffameer.
Chaartariin tibba sanatti akka heera motummaatti tajaajilees kan raggaasifame tibbuma sana ture.
Chaartarichrratti hundaa'unis manni maree motummaa ce'umsaa miseensoota dhaabbilee siyaasaa adda addaarraa babahan hammate hundeeffameera.
Komishinii filannoo hundeessuufis labsiin lakkoofsa 11/1984 mana maree ce'umsaa sanaatti qophaa'uun, bara 1984 baatii Guraandhalaa keessaa filannoon qaamoolee bulchiinsa yeroo naannoofi gandaa ittiin gaggeefameera.
Itti aansees filannoon biyyaalessaa yeroo jalqabaaf Caamsaa bara 1987 keessa kan gaggeefame yoo ta'u, filannoon marsaa ja'aaffaa bara kana akka geggeefamu eegamaa jira.
Yaa'ii ADWUI guyyaa lammaffaa
Seenaa filannoo biyyattii keessatti kan yaadatamu, filannoo bara 1997 gaggeefameedha.
ADWUI kan sagalee caalmaatiin akka mu'atu ibsuun waggoota dheeraaf aangoorra ture, bara filannoo sanatti paartiilee morkkattootaarraa dorgommii cimaan mudate ture.
Haata'u malee, ADWUI filannicha sagalee parsantaa 90 oliitiin mo'achuu himuun aangoorra ture.
Ajandaan walitti baquu ADWUI yaa'iiwwan addichaarratti irra dedeebiin ka'aa tureera.
Ajandaan walitti baquu yaa'iiwwan addichaarratti yeroo garaa garaa ka'aa turrulleen, mata-dureen kun erga Dr Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii booda, waan dhaabbilee miseensaa jidduutti qoodiinsa uumaa ture ta'uun mullateera.
Falaasamni Warraaqsii Dimokiraasii yeroo itti hundeeffamee kaasee dhaabbatichi itti ogganamaa tures gaaffii kessa kan gale fakkaata.
Dura ta'aan addichaafi MM Dr Abiy Ahimad garuu falaasamichi 'Ida'amuun' kan bakka bu'u ta'u beeksisaniiru.
ADWUI walitti baqsuun Paartii Badhaadhiina Itoophiyaa (EPP) hundeessuuf karoorri jiraachuu ibsamuun wal qabatee, paartilee miseensa ADWUI keessaa tokko kan ta'e TPLF walitti baquun adeemsa seeraan alaatii jechuu mormuunsaa ni yaadatama.
Addi kana dura dhaabbilee siyaasaa eenyummaa bu'urreeffachuun hundeffamaniin dhaabbate amma baquun dhuguma tokko ta'aa laata jechuun gaaffii kaasuun isaa hin hafne.
Haa ta'u malee, TPLF ala dhaabbileen sadan hafan; ADP, ODP fi Dhaabbanni Ummattoota Kibbaa qaama walitti baquu akka ta'an ifatti ibsaniiru.
Yaa'ii ADWUI: Hoggansi haaraan wal amantaan uummata gidduutti akka uumamu taasiseera